PSJTV | १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद : दुई-दुई स्वर्णको कथा
Saturday 25 January 2020 | शनिबार, ११ माघ २०७६
१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद : दुई-दुई स्वर्णको कथा
मङ्गलबार, १७ मङि्सर २०७६ पिएसजे न्युज
१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को औपचारिक खेल सुरु भएको पहिलो दिनमै करातेका मन्डेकाजी श्रेष्ठ र तेक्वान्दोकी आयशा शाक्यले एकै दिन २–२ स्वर्णको कीर्तिमान बनाएका छन् ।
उनीहरूको कीर्तिमानसँगै सोमबार नेपालले १५ स्वर्ण आफ्नो पोल्टामा पारेको छ ।
करातेका मन्डेकाजीले व्यक्तिगत काता र टिम काता तथा आयशाले तेक्वान्दोमा २९ वर्षमाथि एकल पुम्से र २९ वर्षमाथि युगल पुम्सेमा स्वर्ण पदक जितेका हुन् । काता र पुम्से दुवै मार्सल आर्ट कला प्रदर्शनी खेल हुन् ।
धावक राजेन्द्र भण्डारीले सन् २००६ को १०औं सागमा ५ हजार मिटर र स्टेपल चेजमा स्वर्ण जितेका थिए । तर डोपिङ परीक्षणमा असफल भएपछि उनका दुवै स्वर्ण खोसिएका थिए । त्यसअघि र पछि पनि कुनै नेपाली खेलाडीले एकै सागमा दुई स्वर्ण जित्न सकेका थिएनन् ।
सातदोबाटोस्थित ५० मिटरको फरकमा रहेको तेक्वान्दो र कराते हलमा मन्डेकाजी र आयशाले इतिहास रचेका खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा विनोद पाण्डे, कुशल तिमल्सिनाले लेखेका छन्।
मन्डेकाजीसँग टिम कातामा महसुस तामाङ र प्रवीण मानन्धर तथा आयशासँग २९ वर्षमाथि युगल पुम्सेमा सञ्जीवकुमार ओझा थिए । मन्डेकाजीले २०१० मा अन्तिम समयमा आएर खेल्न पाएका थिएनन् । शारीरिक बनोट नमिलेपछि आयशा संन्यासको संघारमा थिइन् । सागमा मन्डेकाजीको यो पहिलो सफलता हो । पुम्सेका दुई स्वर्णले आयशालाई सागमा सबैभन्दा सफल नेपाली महिला खेलाडी बनाएको छ ।
सागमा आयशाका ३ स्वर्ण पुगेका छन् । २००६ को श्रीलंका साग र २०१६ को भारत सागमा उनले फाइनलमा पराजित भएपछि रजतमै चित्त बुझाउनुपरेको थियो । २०१० को ढाका सागमा नेपाली तेक्वान्दोले २ स्वर्ण जितेको थियो।
एउटा स्वर्ण आयशाको थियो, अर्को स्वर्ण दीपक विष्टले जितेका थिए । त्यसको अर्को वर्ष यी दुई दाम्पत्य जीवनमा बाँधिएका थिए । दीपक पुरुषतर्फ नेपालका कीर्तिमानधारी खेलाडी हुन् । उनले १९९९ देखि २०१० सम्म गरी सागमा लगातार ४ स्वर्ण जितेका थिए । अहिले यी दुईका ६ र २ वर्षका दुई छोरा छन् ।
‘सबैले मलाई विश्वास गर्नुभयो, त्यसैले मैले जितें । यो जितको श्रेय ज–जसले मलाई विश्वास गर्नुभयो, उहाँहरूलाई नै जान्छ । २ स्वर्ण मेरा २ छोरालाई समर्पित गर्न चाहन्छु,’ आयशाले भनिन्, ‘म पहिलेदेखि नै उदाहरणीय बन्न चाहन्थें । त्यो अहिले पूरा भए जस्तो लाग्छ।’
इच्छाशक्ति, लगनशीलता र मिहिनेती भए सफलतालाई उमेर र शारीरिक अवस्थाले नछेक्ने उनको भनाइ छ ।
११औं सागमा मन्डेकाजी नेपालबाट छानिएका थिए । ३–४ महिना नेपालमा क्याम्प बसेर वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि एक महिना थाइल्यान्डमा रहँदा उनको तौल समूह काटिएपछि साग खेल्न पाएनन् ।
‘त्यो क्षण म सम्झन पनि चाहन्नँ । रुँदैरुँदै फर्केको थिएँ । अर्को साफ खेल्नुपर्छ र नेपाललाई पदक दिलाउनुपर्छ भनेर लागिपरें । कारणवश १२औं साफमा कराते थिएन । त्यो अर्को दुःखद क्षण थियो,’ मन्डेकाजीले भने, ‘म इख लिएर खेलिरहें । तिमीले दायाँबायाँ कतै नहेरी खेलतर्फ मात्र ध्यान देऊ भनेर बुबाले प्रोत्साहन दिनुहुन्थ्यो । त्यसले पनि मलाई जित हासिल गर्न सघायो ।’
मन्डेकाजीले २० वर्षपछि नेपाली पुरुष टोलीलाई कातामा सफलता दिलाएका हुन् । सन् १९९९ मा काठमाडौंमा भएको आठौं सागमा गंगाराम महर्जनले एकल कातामा र प्रविन राना, गोपीलाल बम्जन, कृष्ण राई र विजय लामाले टिम कातामा स्वर्ण जितेका थिए ।
उनै गंगाराम अहिले नेपाली काता टोलीका प्रशिक्षक छन्, जसले नेपाललाई सोमबार कातामा ४ मध्येका ३ स्वर्ण दिलाए । त्यसमा दुई मन्डेकाजीको नाममा परे।
अवैध क्रसर सञ्चालकद्वारा स्थानीयलाई धम्की
उखु किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने उखु मिलको कारोबार रोक्का हुने
हरिवंश आचार्य भन्छन् : नेतालाई भ्रष्टाचार सिकाउने गुरु कर्मचारी हुन्
प्रधानमन्त्री ओली पूर्ण स्वस्थ : अस्पताल
यसकारण सबैले गर्नैपर्छ योग, तर कस्ता व्यक्तिले गर्नु हुँदैन?
मुलुकमा कति बेरोजगार छन् ? यकिन तथ्यांक सरकारसँगै छैन। गत वैशाख १४ मा सार्वजनिक केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदनअनुसार कुल जनसंख्यामा ७९ लाख ९४ जना श्रमशक्ति छ। तीमध्ये ९ लाख ८ हजार बेरोजगार ...
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न, गराउन ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतबार आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकारवालाहरुलाई आचारसंहिता पालना गर्ने भन्दै हस्ताक्षर गरिसकेको स्मरण गराएका हुन् । शनिबार ...
2nd Nov 2019 पिएसजे न्युज
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोटका घाइतेलाई जिउँदै इँट्टाभट्टामा हालेर मारेको आरोपमा पक्राउ परेका कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफताब आलमसहित ११ जनालई प्रतिवादी बनाई प्रहरीले शुक्रबार सरकारी वकिल ...